Yakha Uhlu lwe-imeyili | Yakha Ukuthengisa Kuholela | Database lakamuva Lokuposa
Database lakamuva Lokuposa » Yakha Uhlu lwe-imeyili
Ithimba Ledatha Lamatekisi Eliseduze lizokwakha uhlu lwe-imeyili kusuka kumuntu wakho othile noma izimboni noma izwe. Sicela ukhethe ibhokisi ukuthi iyiphi idatha ofuna ukuyakha. Ngemuva kokukhetha ibhokisi yenza i-oda. Ngemuva kokwenza ukuhleleka kungakapheli amahora we-72 ithimba lethu lizokwakha uhlu lwakho lwe-imeyili futhi lizokunikeza.
Yakha inani lohlu lwe-imeyili
SKU: 67654 Isigaba: Ukukhangisa
Yakha Umuntu Wakho Okuhlosiwe noma Uhlu Lwe-imeyili Yezwe.
Idatha Yokuposa Yamuva izokusiza ukwakha uhlu lwama-imeyili. Uyasitshela ukuthi uluphi uhlobo lwama-imeyili ohlosiwe ofuna ukulakhela iqembu lethu elizokwenzela uhlu lwakho lwe-imeyili oluqondisiwe. Umane usitshele ukuthi uluphi uhlobo lohlu olutholayo ukuze iqembu lethu lizolunakekela. Sizokwakhela u-95% uhlu lwama-imeyili olunembile. Sonke sesikulungele ukuba nohla lokumaketha lwebhizinisi no-imeyili olwandulelwe ngamabhiliyoni ayizinkulungwane ezintathu oluvela emhlabeni wonke futhi senza imikhondo emisha nsuku zonke yamakhasimende ethu.
Ngama-imeyili wethu aholayo ungenza lokhu kuholele ekuholeni okuthengisayo. Siphinde futhi sikunikeze ukuhola okuqondile kokuthengisa kwensiza yakho noma imikhiqizo. Vele usitshele ngomhlahlandlela wakho owudingayo. Sikunikeza insiza yokwaneliseka ye-100% yohlu lwama-imeyili noma ukwakha umkhondo wokuthengisa. Futhi ungahlala uxoxa nathi usuka lapha.
Hire Yakha Uhlu lwe-imeyili Isazi
Bona ngezansi iqembu lethu labakhi be-imeyili abanolwazi. Ungaqasha noma yimuphi umakhi wohlu lwe-imeyili oxoshwe lapha. Ubaqasha lapha futhi ubanikeze imiyalo ukuthi uluphi uhlobo lohlu ofuna ukulakha, yiliphi izwe eliqondisiwe, izwe eliqondisiwe, idolobha, imboni okuhlosiwe, umuntu okuqondisiwe kuye. Bazokwakhela uhlu futhi balethe lolu hlu kuwe. Bazokwakha uhlu oluhlukile olungakwazi ukuthengisa noma yiluphi. uhlu lwakho kuphela.
Umakhi wohlu Onolwazi
UMd Rabi (uchwepheshe wohlu lwe-imeyili olwenzelwe inkampani ye-c level person) Amahora we-40 asebenza $ 200
Sawubona, nginguRabi. Ngineminyaka engu-5 yokuzama yokwakha imininingwane yokuxhumana yenkampani esezingeni lomuntu.Ngizokwakha uhlu lwakho lwama-imeyili esihloko esihlosiwe avela emhlabeni wonke. Izinga lami lehora ngu- $ 10. Ungangiqasha ngakho-ke ngizokwenzela uhlu lwe-imeyili. Futhi ngizokwakha uhlu oluhlukile futhi uhlu olunembile lwakho.
UMd Ali Hasan (Isazi Sokuthengisa Isizukulwane Sokuthengisa) i-40 Amahora umsebenzi $ 200
Sawubona, ngingu-Ali Hasan. Nginokuhlangenwe nakho kweminyaka engu-5 yokwakha i-sale lead.Ngizokwakha umkhondo wakho wokuthengisa oqondisiwe ovela ezweni lonke. Izinga lami lehora ngu- $ 10. Ungangiqasha ngakho-ke ngizokwakhelela i-Sales lead. Futhi ngizokwakha ukuhola okuhlukile nokuhola okuyikho kwakho.
I-MST Sabina (Uhlu Oluxhunyiwe Lwezimboni Oluhlosiwe) Umsebenzi we-40 amahora $ 200
Sawubona, nginguSabina. Nginokuhlangenwe nakho kweminyaka engu-6 yokwakha uhlu lokuxhumana kwezimboni.Ngizokwakha uhlu lwakho lokuxhumana oluhlosiwe lwemboni oluvela ezweni lonke. Izinga lami lehora ngu- $ 10. Ungangiqasha ukuze ngizokwenzela uhlu lwezimboni. Futhi ngizokwakha uhlu oluhlukile nemininingwane efanelekile yakho.
I-MST Asia (Uhlu Lokuxhumana Olungiselelwe Umuntu) Amahora we-40 amahora $ 200
Sawubona, ngingu-ASIA. Nginokuhlangenwe nakho kweminyaka engu-4 yokwakha uhlu lokuxhumana lomuntu we-build.Ngizokwakha uhlu lwakho lokuxhumana lomuntu oqondisiwe ovela ezweni lonke. Izinga lami lehora ngu- $ 10. Ungangiqasha ukuze ngizokwakhelela uhlu lomuntu. Futhi ngizokwakha uhlu lomuntu oyingqayizivele nemininingwane efanelekile yakho.
I-MD Rifat (Uhlu Lokuxhumana Kwamakhasimende) Umsebenzi we-40 Hours $ 200
Sawubona, nginguRifat. Nginesipiliyoni se-5years sokwakha uhlu lokuxhumana namakhasimende.Ngizokwakha uhlu lwakho lokuxhumana namakhasimende oluhlosiwe oluvela ezweni lonke. Izinga lami lehora ngu- $ 10. Ungangiqasha ukuze ngizokwenzela uhlu lwamakhasimende. Futhi ngizokwakha uhlu lwamakhasimende olwahlukile nolwazi oluqondile lwakho.
I-MD Monir (Yakha Uhlu lwe-imeyili lwe-B2B) Umsebenzi we-40 amahora $ 200
Sawubona, nginguMonir. Nginesipiliyoni se-5years sokwakha uhlu lwe-imeyili ye-b2b.Ngizokwakha uhlu lwakho lwama-imeyili we-B2B oluhlosiwe ezweni lonke. Izinga lami lehora ngu- $ 10. Ungangiqasha ngakho ngizokwakhelela uhlu lwe-B2B. Futhi ngizokwakha uhlu lwe-B2B oluhlukile nolwazi oluqondile lwakho.
I-MD Razak (Yakha uhlu lwe-imeyili ye-B2c) Amahora we-40 amahora $ 200
Sawubona, ngiyiRazak. Nginesipiliyoni se-5years sokwakha uhlu lwe-imeyili ye-B2C.Ngizokwakha uhlu lwakho lwama-imeyili we-B2C oluhlosiwe ezweni lonke. Izinga lami lehora ngu- $ 10. Ungangiqasha ngakho ngizokwakhelela uhlu lwe-B2C. Futhi ngizokwakha uhlu lwe-B2C oluhlukile nolwazi oluqondile lwakho.
I-MD Jakariya (Uhlu Lwabamele Abakhi Bezezakhiwo) Umsebenzi we-40 amahora $ 200
Sawubona, nginguJakariya. Nginesipiliyoni se-5years sokwakha uhlu lwe-ejenti yendawo ethengisa izindlu nomhlaba.Ngizokwakha uhlu lwakho lwe-ejenti yempahla ebhekisiwe evela ezweni lonke. Izinga lami lehora ngu- $ 10. Ungangiqasha ngakho-ke ngizokwakhelela uhlu lwe-ejensi yempahla. Futhi ngizokwakha uhlu lwe-ejenti eyingqayizivele nemininingwane efanelekile yakho.
I-MD Mominul (Uhlu Lothintana Nempilo Lokunakekelwa Kwezempilo) Umsebenzi we-40 amahora $ 200
Sawubona, ngingu-Mominul. Nginesipiliyoni se-5years sokwakha Uhlu Lokuxhumana Nokunakekelwa Kwezempilo.Ngizokwakha Uhla lwakho Lokuxhumana Nokunakekelwa Kwezempilo okuhlosiwe kusuka ezweni lonke. Izinga lami lehora ngu- $ 10. Ungangiqasha ukuze ngizokwakhela Uhlu Lokuxhumana Nokunakekelwa Kwezempilo. Futhi ngizokwakha uhla lokunakekelwa kwempilo oluhlukile nemininingwane yolwazi efanelekile yakho.